Taariikhda My Butros » Sidee u leedahay in lagu Date First Amazing
Last updated: Oct. 21 2020 | 5 min akhri
Taariikhda A horeysay noqon kartaa waqti aan fiicneyn uu labada dhinac. Midkoodna ma ogyahay waxa laga filan karo, xataa haddii aad ka hadashay in qofka internetka ama telefoonka waxayna dareemayaan in aad iyaga si fiican u ogaadaan, dadka intooda badan u muuqdaan in ay dareento isku buuq ka hor taariikhda ugu horeysay. Sidaas halkan waa qaar ka mid ah talooyin ay u leeyihiin taariikhda ee ugu weyn.
Hayso maalinta ugu horeysa ee gaaban - Sababta oo ah maalinta koowaad waxay noqon kartaa in yar oo kacsan waa fiican si ay u gaaban oo macaan. Sidaas waxaad heli kartaa waqti badan isu soo urureen, iyo dhameysan sare ah. Macna ma laha inta badan aad ugu xiran waxaa laga yaabaa in marka aad ayaa loogu sheekeeyo online, waxay noqon kartaa gebi ahaanba kala duwan marka aad la kulanto qof ahaan, iyo ma garan kartid sida aad isfahmi ilaa aad waqti iyaga la nolosha dhabta ah. Sidaas sita taas maanka ku hayn taariikhda ugu horeysay gaaban.
By u qabanaynaa sidan haddii aadan ku kalsoon tahay ka dibna aad hore tagi karo. Si kastaba ha ahaatee haddii aad THE run ahaantii jeclahay, sidoo kale waxaa muhiim ah in aad taariikhda gaaban. Qalad weyn sameeyaan dadka marka ay ku shukaansi waa in ay waqti badan ku qaataan wada si deg deg ah. Inkasta oo ay caadi tahay doonayaan in ay waqti islana qaataan, marka aad rabto mid kale, oggoleyn la xidhiidha in la horumariyo ka badan si dabiici ah haddii ay ku horumarineyso dheeraad ah si tartiib tartiib ah muddo ka dib. Qaabkan waxaad ka heli kartaa in la ogaado mid kale si tartiib tartiib ah. Sidoo kale waxaad kasta oo kale oo ka qiimeyn doonaa haddii aadan xaq aad u heli karaa bilowga. Dadka caafimaadka qaba iyo weliba sii noloshooda iyaga u gaar ah sida shukaansi waqti.
Sidaas ku hay Iska ilaali inaad dhacsaneyn casho ee taariikh koowaad. Haddii ay noqoto in uu noqdo xun (oo karaankeeda) waxaad u baahan doontaa in iyada oo ugu yaraan saacad fadhiisan, sida caadiga ah ka dheer, iyaga la, ama waxay noqon kuwo aad u qallafsan in waqti hore iska tagaan.
On oo xiiso Ma wax gacmaha - Inkastoo cabniin ah in bar yahay doorashada guud ee taariikhda ugu horeysay u dhan ma aha in inventive. Sidoo kale waxay noqon kartaa wax yar adag tahay in la jebin barafka marka aad ka soo midba midka kale ku fadhiya oo ay goob rasmi ah. In xididka la mid ah dilis kafeega ah waxay noqon karaan doorasho wanaagsan ee taariikhda marka hore sababtoo ah waa sahlan oo dhakhso ah, Si kastaba ha ahaatee haddii aad dhabtii doonaysid in la sameeyo aragti ah sababta aan u tagaan wax aan caadi ahayn oo gacmaha on halkii. Dooro wax meesha aad isla sameyneysaan waxqabad, Gacmaha dheeraad ah oo ku saabsan sida fiican waxay kaa caawin kartaa jebin barafka. Tusaalooyinka fiicani waa la wada karinta, socday socod oo ay goob aad u qurux badan, pottery ama wax meesha aad leedahay si ay u shaqeeyaan koox ahaan. Tani waxay qaadan doontaa cadaadiska off ka mid ah laba idinka mid ah sida aad u wada wax loo sameyn doono. Waxa ay u ogolaataa shaqsiyad aad u dheeraad ah oo si dabiici ah ku yimaadaan, halkii taariikhda bedalayo 'wareysiga' ah miiska dhinaca, taas oo inta badan waxay dhici kartaa marka aad la kulanto in bar ah.
Nabad - Tani waa qayb ka mid ah dheg dater ah ee noqon, gaar ahaan haweenka aan la qabin. Waxaa shaki kuma jiro in aad waa in mar walba ammaanka ee maskaxda iyo inay doortaan inay ku kulmaan meel dadweynaha markii ugu horeysay ee aad la kulantid qof. Ha ogolaadaan inay tagaan casho ee ay guriga. Sida ugu wanaagsan ee wax kasta oo aad dareensan tahay inaad ka hadlaya online taqaan qof, aad marna sheegi kara sida qof lagu kalsoonaan karo waxaa ilaa idin ku qaatay waqti iyaga la. Sidoo kale, run ahaantii habayn galay aad dareen (dareen wanaagsan). Waxaa jirto in aad loo ilaaliyo iyo sida caadiga ah aad dareen ayaa kuu sheegi doona marka ay wax ama qof aan xaq u dareemaan. Dhegayso in ay had iyo goorba u gelin ammaanka koowaad.
Hubi in aad ku jirtid jir saxda ah ee maskaxda inta aadan aadin on taariikhda - dad badan oo iska tag in ay taariikhda si toos ah uga shaqo, iyo halka ay jiraan wax qalad ah arrintan waxaa muhiim ah in la hubiyo in aad soo baxayo jir saxda ah ee maskaxda u ah taariikhda. Haddii madaxa aad weli waa ku aad 'u sameeyo' liiska ma noqon doonto xiiso badan oo aad taariikhda! Sidoo kale haddii aad kor u carabka ku adkeeyay, faraxsaneyn iyo aad barooranaya ma dhigi doonaa a ee ugu wanaagsan. Dhowr daqiiqo u qaado si aad u nasato iyo diyaariyaan naftaada ka hor inta aadan madax off on taariikhda. Neef qoto dheer qaar ka mid ah iyo sameyn jimicsi iskala ah haddii ay habboon tahay. Diyaari maskaxdaada - arki sida aad jeclaan lahayd taariikhda si ay u tagaan. Xitaa haddii aadan si toos ah u tagaan shaqada aad qaban karto halka tan baska.
Dumarka qaarkood saacado qaadan diyaar jir ahaan, laakiin ha waqti kasta ku qaataan diyaarinta maskax. Inkastoo ay fiican tahay in aad hubiso in aad isku kalsoon tahay la muuqaalkaaga, saacadood faqri u ah oo ku saabsan run ahaantii ku dari kartaa cadaadis. Halkii la qaataan oo kaliya muddo ku filan si aad isu eegto smart iyo wanaag dareento, ka dibna waxey dhawr daqiiqo ayaa sidoo kale isku diyaarineysa maskaxdaada. Waxaa fiican inaad tagto oo ku saabsan taariikhaha aad dareemayso Salel iyo degganeyd. Waxa ay noqon kartaa wax fiican u ciyaaro qaar music uplifting inta aad helayso diyaar iyo xataa qoob ku hareeraysan qolka. Isaga oo sheegay in aadan iska joojin taariikhda haddii aanad ee gobolka kaamil ah maskaxda ama haddii aad walwalsan. Inta badan marka aad bax guriga oo ku saabsan taariikhda aad nasato doonaa oo xiiso leh.
Naftaada - Mararka qaarkood marka ay dadka u tag on taariikhaha marka hore iyagu naf ahaantoodu. Waxay bedeli karaan Shaqsiyadda in ay isku dayaan in ay caddayn qofka kale. Waxaa laga yaabaa neerfaha si aad u heshid ka fiican iyaga oo waxay ku dhamaan dhaqmayaan qaab daran, isku dayaya aad u adag, clamming ama xitaa gashanno hore ah si loo qariyo neerfaha. Tani gebi ahaanba waa loo baahnayn oo dhaawici kara fursada la abuuro xiriir ah oo madadaalo leh taariikhda aad. Waan ogahay waxa ay noqon karaan dareemayaasha kulan sugeyso qof ayaa markii ugu horeysay si aan kuu sheego qarsoodi yar. QOF WALBA dareensan nervous taariikhda ugu horeysay! Sidaas taariikhda u badan tahay in la dareemi doonto oo kaliya ay kabaqayaan in sida aad. Waa wax caadi ah si aad naftaada ha is garab dhigaan. Halkii walwal ku saabsan dareemeyaasha diirada saaro wax cusub oo ku saabsan qofkan barashada ee hore oo idinka mid ah oo ka feker ay ku raaxo. Sidaa ayaad naftaada ka heli doontaa arrin lagu nasto si dabiici ah. Dabcan haddii aad baan u doortay inuu sameeyo gacmaha ku saabsan hawlaha sida ku cad tan kor ku xusan waxa kale oo ku caawin kara si aad u nasato. Markii aad dareensan tahay dabacsan shakhsiyadaada run ku iftiimin doonaa iyada oo. Just iska. Waxaad tahay kaamil ah sida saxda ah sidee tahay.
Hayso xiiso leh - In dhaqanka reer galbeedka ee aynu wada muuqdaan in ay qaataan si dhab ah shukaansi. Illoobin ku saabsan in la ogaado haddii qofkani waa la Wadaage nolosha ku haboon xilligan la joogo. TAARIIKHDA A HORE MA AHA EE ogaadaan haddii ay ku haboon yihiin saaxiib / WAXYAABAHA saaxiibtiis. Taas ka dib yimaado. Fursadda yimaadaan aanay u – taariikhaha horeysay badankiis ma keeni xidhiidhada iyo haddii aad taqaan waxa kaa caawin kara in aad maamusho filayo. Taariikhaha First fudud yihiin si aad u hesho waxaad u soo baxay waxaa shirka iyo lalana xiriiro dadka cusub, oo iyagu waa kuwa aad naftaada ku riyaaqayaa iyo raaxaysasho. By habka 'madadaalo' dhacdo in tan macnaheedu uusan qaadan runtii sakhrad ama galmo, labadaas arrimood oo waa in laga fogaadaa taariikhda ugu horeysay (haddii aad rabto taariikhda labaad in uu yahay). Wixii macaamiisha kaliya ee aan aan la shaqeeyo mar walba ku talinayaan ka baxdo waxaa jira iyo shukaansi adduunka dhabta ah. Waxaan aad ugu boorinayna in aad akhriya maqaal on shukaansi sida therapy in ka badan bartaan.
Hayso xiiso shukaansi!